ओलीलाई सर्बोच्चको झाप्पु -नया संबिधानमा २५ मन्त्रि बनाउने भन्ने किन ३० बढीबनाइयो ? ~ Khabardari.com
ओलीलाई सर्बोच्चको झाप्पु -नया संबिधानमा २५ मन्त्रि बनाउने भन्ने किन ३० बढीबनाइयो ?
चिल्ला कुरा तर फुस्रा काम गर्दैआएको ओली सरकारको रवैया देखि जनमानसमा आक्रोस त बढेकोनै छ । नया संबिधान कर्वन्वयन गर्ने भन्दै आफै नया संबिधानमा उल्लेख गरिएको २५ मन्त्रि बिपरित ३० बढी मन्त्रि बनाएर आफुलाई ढोंगी साबित गरेको छ ।
यस कदमको बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारणसहित यही २८ गते उपस्थित हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले मंगलबार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो। आगामी पुस २८ गते लिखित जवाफपछि २९ गते अग्रधिकारसहितको सुनुवाइ हुने आदेशमा उल्लेख छ।
कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले नेपालको संविधान–२०७२ विरुद्ध नेपालको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ७६ को उपधारा ९ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा 'राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ' भन्ने व्यवस्थाको विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको रिट निवेदनमा भनिएको थियो ।